Ukuguquka - Ingozi esifubeni - isifo se reflux
Kutheni kungekho sisisu esisondeleyo?
Ziziphi iimpawu eziqhelekileyo?
Ndifuneka nini ukuya kudokotela?
Inkulu kangakanani umngcipheko womhlaza?
Abaninzi baye babona umfanekiso ngaphambili: umntu obonakala ehlamba umlilo, kwaye ngasemva kwayo umxholo othi "Ukuqumba". Oku kunjalo imifanekiso ephosakeleyo, kuba ukutshabalalisa, naphezu kwegama layo, akukho nto eyenziwa ngomlilo okanye ngamatangatye. Kunoko, kukho ukucaphuka kweembrane ezinqamlekileyo kwisigxina esilandelayo-into engeyiyo.
Ukuguquka - Ingozi esifubeni (isifo se reflux)
Phantse wonke umntu ufumana oku ngezihlandlo. Ngethuba nje iimpawu zinyamalala emva kwazo emva kweeyure okanye ngeentsuku ezimbini okanye ezimbini, akukho nto ingakhathazeka ngayo. Ku malunga ne-10 ukuya kwi-15 yeepesenti zalabo abachaphazelekayo bayeke ukutshisa emqaleni, nangona kunjalo.
Ukuguquka kwesifo - isifo se reflux
Kuzo, i-mucosa inamandla kangangokuba igxotha. Isifo esibizwa ngokuba yi-reflux, esiphumela kuso, kufuneka siphathwe kwimeko nganye. Nangona ukunyuka kwengqondo kulungele ukuhlala kungenakubungozi: kwizigaba eziphambili zesifo, ngaphandle kwonyango olufanelekileyo, iingxaki zempilo ezinzulu - kuquka nomhlaza - usongela.
Iimpendulo ezilandelayo kwimibandela ebalulekileyo malunga nokukhwa kweentliziyo kunceda ukuphepha okubi kakhulu.
Kuvela njani ukubandezeleka?
Ingcambu yobubi yintsi yesisu. Ilungiselela ukugaya ukutya kuqala kwaye "uyigle" ngokuhlula amaqanda abamhlophe. Ufezekisa lo msebenzi ngoncedo lwe-enzymes (pepsin) kwaye -yinto ezwakalayo engaqhelekanga ekuqaleni-inxalenye ye-hydrochloric acid.
Hydrochloric acid emzimbeni wethu? Ngaba akuyingozi loo nto? Kungekude nje ijusi yesisu isala apho ikhona-esiswini. Nangona i-pH ene-acidic ye-1 eya kwi-3-eyikhulu elinamawaka ngaphezulu kune-vinegar - i-fluestive fluid ayinobungozi apho. Ngenxa yokwakheka okhethekileyo, iindonga zangaphakathi zesisu zingakwazi ukunyamezela le ndawo.
Ngokuqhelekileyo, i-sphincter igcina utshintsho phakathi kwe-esophagus nesisu esiswini ukuze kungabi nali-asidi ephunyukayo ngokuvulwa kwesisu. Kodwa umsebenzi wale misipha ungaphazamiseka ngenxa yezizathu ezahlukeneyo (jonga umbuzo olandelayo). Ngenxa yoko, isisu sesisu siphumelela kwisiqulatho kwaye sithukuthelise i-mucosa. Oku kubonakala njengentlungu.
I-sphincter, ebizwa nangokuthi "i-sphincter", evala uphawu lwesisu, ingahlaselwa ngenxa yezizathu ezahlukahlukeneyo. Okokuqala, kuyinto engavamile yokuguga, kungenxa yoko ukukhwabanisa kuvela kwi-50. Ubudala buba khona ngokuphindaphindiweyo. Oku ngokuqhelekileyo kwenzeka ebusuku, kuba i-sphincter phakathi kwesisu kunye nesisu selele ngakumbi ngexesha lokulala. Ukongeza, i-reflux ye-contents content is inzuzo xa ilele phantsi.
Kwezinye iimeko, i-break-break breaks result in the displacement of the stomach esiswini. I-esophagus ilahlekelwa ngokoxinzelelo kwayo, kwaye i-sphincter ayisasebenziyo ngokufanelekileyo. Kwiqhekeza elikhulu, isisisu esisuka kwesisu ngezinye izihlandlo siphumelele kwi-pharynx.
Uphawu lweklasiki lokutshiza i-heartburn lubuhlungu kunye nokutshisa ebudeni. Ngezinye iinkathazo iintlungu ziphuma emva kwebele. Ukulahla okanye ukusela akuphuculisi ukuvakalelwa. Kodwa le ntliziyo ayikho imfuneko. Kwezinye iimeko, i-reflux ye-acast acid inomqala emqaleni ayifaki nayiphi na impawu kuyo yonke into - oku kukhohlisayo. Ukuba iimpawu ziyavela kamva, eso sifo sibe sesiteji esiphambili, okwenza ukuba unyango lube lukhuni.
Ziziphi iimpawu ze-atypical?
I-asidi ye-gastric kwisinye isinye idala iimpawu ezingekho isigulane okanye ugqirha onxulumene nentlungu. Ngokukodwa abantu abaselula banokukhalaza ngesifo seentlungu. Ukuba ngaba oogqirha baye balawula ukuhlaselwa kwintliziyo, ingxaki idla ngokukhawuleza.
I-asidi emqaleni ingakhokelela ekukhwehleleni okungapheliyo okanye ekuhlambulukeleni, amayeza aqala ukutolika njengento ehambelana nempawu ezibandayo okanye ze-asthma. Ngamanye amaxesha abagulayo baxela umzi womzimba wangaphandle kwi-larynx.
Ukutshitshiswa kunye nokutshisa emlonyeni akukho isizathu sokukhathazeka. Izikhalazo ezingaqhelekanga akukho mntu kufuneka ahambe kugqirha. Mhlawumbi kwakukho ikhofi eninzi kakhulu, okanye isidlo esinzima, isidlo esinamafutha aphezulu. Kulo hlobo lokutya, isisu senza i-acid ephezulu. Uvakalelo olungathandekiyo emqaleni luvame ukuhamba ngokwalo. Nangona kunjalo, ukuba iimpawu zivela kaninzi - amaxesha amaninzi ngeveki - abagulayo kufuneka babonane nodokotela. Omnye oye wahlamba iinyanga eziliqela kwiintsuku ezimbini ukuya kweyesithathu uya kuncomeka ukuba ahlolisise imeko ye-esophagus.
Kubukeka njani unyango?
Eyokuqala, kukho ukuhlaziywa kwemikhwa. Ngaba isisindo somzimba silungile? Ngaba ndihamba ngokukhawuleza? Ukuqhathaniswa nokugqithisileyo kunokukhuthaza ukutshabalalisa. Nceda uqaphele xa usela iwayini emhlophe, iilekese kunye namafutha. Xa kungathandabuzeki kungcono ukwenza ngaphandle kwayo. Kuya kufana nekhofi, i-tea emnyama kunye nokusela okune-carbonated. Ukubhema kuyingozi kuba i-nicotine iyanciphisa i-salivation engayithobeli i-acid isisu. Nangona ukulungiswa kwemikhwa kunokunceda, akuninzi ngokwaneleyo. Kwiimeko ezinjalo, ngoku kukho inani lezonyango ezisebenza ngokukhawuleza.
Izifo ezinobungozi, amayeza aphethwe yi-asidi ayafumaneka (izithako ezisebenzayo: i-hydrotalcite, i-Algeldrat, i-magaldrate, i-sodium aluminium carbonate) kunye ne-calcium kunye ne-magnesium carbonate. Amalungiselelo aqukethe i-ranitidine okanye i-famotidine inqanda ukubunjwa kwe-acid esiswini. Ukuba ukuphazamiseka kwentshukumo yesisu yimbangela, izilwanyana zamachiza kunye nezicatshulwa ze-peppermint, i-caraway, i-gentian kunye neentyantyambo ze-candida ziyakunceda. Kwiimeko ezinzima amagqirha anika izilwanyana ukusuka kwiklasi yeproton pump inhibitors. Bawuthintela ukubunjwa kwe-asidi ngempumelelo, kodwa ungasebenzi ngokukhawuleza.
Ezinye iinqununu zenza i-sphincter muscle ikhulule ekungeneni kwesisu, kuququzelele ukuhlaziywa kwesiqulatho sesisu esiswini. Ezi zibandakanya i-asthma ekhethekileyo, intliziyo kunye namachiza egazi. Kwakhona, ezinye i-calcium channel blockers kunye ne-anti-pressressants can have a negative effect. Nangona kunjalo, izigulane akufanele zenze ngaphandle kwamachiza abo - eza kuba yingozi yokuphila. Abantu abaphethwe yintlungu kufuneka baqale bathethe nodokotela wabo.
Ngaba umsebenzi uncedo?
Ukuba umntu oswele intliziyo akafuni ukuthatha nayiphina imishanguzo, ukuba akayinyamezeli okanye ukuba ayinayo impembelelo kubo, oogqirha banokukunceda ekusebenzeni. Olu hlobo lubizwa ngokuthi "fundoplication". Amagqirha avela kwisisu kwisango esiswini ayenze i-cuff, apho balala khona kwenguqu ukusuka kwisisu ukuya kwisisu. Umphumo obangela ukuba i-sphincter iphosakele isebenze ngokufanelekileyo kwakhona. Uninzi lwezigulane zihlala zixakeke emva kokusebenza. Ukongeza kwiimeko eziqhelekileyo ezingayilandela naluphi na utyando (ukusuleleka, ukuphulukiswa kwesilonda esingalunganga), inkqubo ikhuselekile (ukuba yenziwe ngugqirha onamava).
Kwimizuzu engama-10 yabantu abanesifo se-reflux, kukho utshintsho lwe-mucosal kwi-oopopus. Laba ngabaxhasi bemhlaza, oogqirha bathetha "i-Barrett's syndrome". Ininzi yezi zi gulane zichaphazelekayo, apho isifo se reflux senziwe ngokukhawuleza okanye sasingabonakali ngaphambili. Nangona kweli nqanaba, oogqirha banokuphatha kakuhle - ngaphandle kokuba isiguli sigxina ngexesha kunye nezikhalazo zakhe.
Oku akusoloko kunjalo, ngoko ngamanye amaxesha umhlaza wangempela uvela kwi-precancer. Ngokuqhelekileyo ukusasazeka okunjalo kuqala kuhlala kwindawo ephantsi. Xa kufumanwe ekuqaleni, oogqirha bahlala bekwazi ukususa iintsholongwane zomhlaza usebenzisa i-endoscopic procedures. Kubalulekile ukubeka esweni iimeko zesigulane sezo gulane emva kokungenelela. Ukuba ngaba yimpumelelo, iingxaki ezinzima azinqabile.
Umlomo Ophakathi Ukuvuvukala | Amachiza ezempilo